युवतीलाई ट्राफिकले चिट काटेपछि समाचार बन्याे भाइरल, के थियाे करण ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more युवतीलाई ट्राफिकले चिट काटेपछि समाचार बन्याे भाइरल, के थियाे करण ?
युवतीलाई ट्राफिकले चिट काटेपछि समाचार बन्याे भाइरल, के थियाे करण ?
जेठ २७ गते, २०७६ - २१:२९
ट्राफिक नियम उलङ्घन गरे ट्राफिकले सवारी चालकलार्इ राेकेर चिट काट्नु कुनै नाैलाे कुरा हाेइन । तर ट्राफिकले काटेकाे साेही चिटकाे समाचार अहिले संसारभर भाइरल भएकाे छ । एक युवतीलार्इ ट्राफिक प्रहरीले चिट काटेपछि उनले साे चिट सामाजिक सञ्जलमा अपलाेड गरेपछि भाइरल भएकाे हाे ।
उरूग्वेकाे पेसेदु सहरमा केही दिन पहिले एक ट्राफिक अफिसरले बाइकमा सवार एक सुन्दर युवतीलार्इ चिट काटे । उनले चिटमा तपार्इलार्इ देखेर सडकमा हिँड्नेकाे ध्यान तान्ने र त्यसबाट सडक दुर्घटनाकाे सम्भावना हुने व्यहाेरा रसिदमा लेखिदिए । यति मात्र हाेइन, उनले स्पेनिस् भाषामा ती युवतीसँग अाफ्नाे प्रेम प्रकट पनि गरे, र लेखिदिए, म तिमीलार्इ प्रेम गर्दछु ।
महिलाले भने साे चिट सामाजिक सञ्जालमा अपलाेड गरिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा अपलाेड गरेकाे साे चिट भाइरल नै भयाे । अधिकारीहरूले साे घटनाबारे जाँच गर्न अादेश दिएका छन् ।
जेठ २७ गते, २०७६ - २१:२९ मा प्रकाशित